Be careful with these dirty tactics Myanmar Military Cyber-troopers, your country will DISAPPEAR with the INVASION of UN forces | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Myanmar government must stop the widespread anti-Muslim HATE CAMPAIGN by radical Buddhists
A sa..Shwe Ba Nar Mae..”At First “Shwe Ba” will suffer…but wait and see..HE WILL WIN over the villain ultra-Nationalist 969 »
My FRIEND SENT this latest news….နောက်ဆက်တွဲ။ ဒါကတော့ စရဖ သတင်းပါ။
”မန္တလေးမှာ အဲဒီအခွေတွေ ဖြန့်တာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပတ်ကပါ။ မန္တလေးမြို့ အမှတ်(၂) ရဲစခန်းဘေး ကပ်လျက်က ဆိုင်က ဖြန့်တာ။ ဆိုင်နာမည်တော့ ရုတ်တရက် မမှတ်မိဘူး။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တယောက်က သတင်းပို့လို့ သွားပြီး ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ အခွေ ၂ဝဝ ကျော် သိမ်းဆည်းခဲ့ပါတယ်။ အခု တရားရင်ဆိုင်နေပါတယ်”
My friends said>>> ” အဲဒီ အခွေက လွန်ခဲ့တဲ့ တပတ်လောက်က ထွက်တာပါ။ ဝီရသူက မွတ်စလင်မ်ဆိုင်က ရတာလို့ ပြောပါတယ်။ ကျနော်တို့ ကြည့်ရပါတယ်။ တော်တော့်ကို ရိုင်းစိုင်းယုတ်မာတဲ့ လုပ်ချက်တွေနဲ့ တင်ပြထားတဲ့ အခွေပါ။ ဒါနဲ့ ဦးစိန်ဝင်းအောင် (အစိုးရ ဖွဲ့ပေးတဲ့ ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ကြည်ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဌ
ဦးသိန်းစိန်နှင့် ခမည်းခမက်) ကို အဲဒီအခွေ လက်ရောက်ပေးပြီး အကျိုးအကြောင်း ပြောပြခဲ့တယ်။ ဦးစိန်ဝင်းအောင် က မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးကို ဒီကိစ္စ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ သူကိုယ်တိုင် ပြောခဲ့မယ်လို့ ကတိပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါကို မန္တလေးမြို့က ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ကြည်ရေး အသင်းအဖွဲ့ကလူတွေ အားလုံး သိပါတယ်တဲ့။ အဲဒီလူတွေကလည်း အခြေအနေ စောင့်ကြည့်နေတဲ့ သဘောရှိတယ်။ ဒီလို အတိအကျ အထောက်အထား စုံလင်စွာနဲ့ လက်ရောက်ပေးတာတောင် ဦးစိန်ဝင်းအောင် တို့ ဘက်က ဘာမှ မလုပ်ဘူးဆိုရင် သူတို့အားလုံး နှုတ်ထွက်မယ့် အခြေအနေ ရှိတယ်။”
ခွေ ရောင်း တဲ့ ကောင် တွေ ထက် ။ ခွေ ဘယ် က ထွက် ကို သူ တို့ လိုက် ရ မှာ ပါ ။ နို့ မို့ ဆို ရင် တေါ့ ဟန် ပြ သာ သာ အ ရေး ယူ မှု ပါ
Yes…Than Shwe was ONCE…head of တပ်မတော် စိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေး…Dirty propaganda dpt of Myanmar Military…hitting the Muslims below the belt. Be careful…with these dirty tactics..Myanmar Military will DISAPPEAR with the INVASION of UN forces and would becomeasmall rebel group in NEW UNION OF BURMA.
Tags: Asia, Buddhism, Burma, Muslim, Myanmar, Than Shwe
This entry was posted on November 18, 2013 at 12:08 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.